Faadumo Aadan Waa Qoraa Caan ah oo Qormo Qiimo Badan noo Diyaarisay | WARARKA PUNTLAND
Home Arimaha Bulshada Faadumo Aadan Waa Qoraa Caan ah oo Qormo Qiimo Badan noo Diyaarisay
Faadumo Aadan Waa Qoraa Caan ah oo Qormo Qiimo Badan noo Diyaarisay
Haweenku waa, hoyga nolosha waa hibo Eebbe, haddana waa halganka iyo hiigsiga naftaada.Waa horumarka iyo himilada adduunka. Waa hugaad huwantahay kaa ilaaliya dabaylaha iyo duufaannada xoogga badan. Waa naruurada nolosha iyo neecawda adduunka. Waa tiirka nolosha iyo toolmoonta niyadda. Waa liibaanta adduunyo iyo liibaanta aakhiro haddana waa laf dhabarta adduunka.Waa aayaha iyo anbo qaadka nolosha.Waa qiimaha qoyska iyo quruxdaada.Waa wehelka iyo wanaagga noloshaada.Waa farxadda iyo filashada wanaagaagga. Waa wax soo saarka iyo warshadda dadka. Waa macallinka macallimiinta dhammaantood.Waa maamule, maamula hawl kasta oo la soo darista hadday mid taban iyo mid toggan tahayba. Waa tababare, tilmaame iyo waliba taakuleeye. Haddii aanay haweeni jirin dadku may tarmeen, adduunkuna ma horumareen mana hagaageen. Haweenku waa dugsiga koowaad iyo Jaamacadda ugu danbaysa.
Haweenku cid kale ma ahee hareerahaaga ka eeg! Waa hooyaday, hooyadaa iyo hooyadood, waa habaryartay, habaryartaa iyo habaryartood. Waa ayeyday, ayeydaa iyo ayeydood. Waa walaashay walaashaa iyo walaashood. Waa eddadday, eddaddaa iyo eddaddood. Haweenku cid kale ma ahee waa hooyadaa oo kugu sidday caloosha sagaal billood dhib kastana kula soo martay.Way ku soo barbaarisay, haaneedkana way ku siisay. Maxay ku xanbaartay, xanjeerkana kuu giijisay. Hurdo kuu daysay adiga awgaa. Iyadoo beerkeedu madhan yahay gaajo awgeed, cunto may cunin iyadoo ku siisa mooyee. Qayrkaa bay mar kasta ku dhaafin jirtay kuna dhaafisaa. Way kuu dhibirsan tahay kuuna dhibir sanaan jirtay markasta waliba way kuu dhabar adaygtaa.
Dhabarkay kugu sidday muddo badan kaamanay daali jirin. Hadda oo la joogana wadnaheegay kugu siddaa sababtoo ah dhabarka kuguma qaadi karto oo waad ka waynaatay, haddii se la odhan lahaa ilmahaaga ku sid inta aad nooshay, way kugu sidi lahayd oo maya kumay warceliseen! Alla maxaa hooyo ka wanaagsan? Cidna. Toloow ma is leedahay hooyadaa abaalkeeda waad gudday? Maya ha ka yaabin, inaan adiga iyo aniguba gudnay abaalkeeda. Inaynu anfacnno mooyee, lagama yaabo ina aynu gudi doonno abaalkeeda.Waayo! Sababta adigaan kuu daayey.
Maxaa hadda kaa ilmaysiiyey miyaad la yaaban tahay arrintan? Maya, ha la yaabin taasi u fiirso! Cudur kuguma nacdo, kuumanay cadhoon waligaa. Way ku jeceshahay mar kasta, kaana jeceshay nafteeda. Kuma hiifto kumanay habaarin waligeed. Da’ kastood tahay ilmaheedii shalay dhashay uun baad u tahay. U ducee hooyadaa markasta. Habaryartaa waa hooyadaa oo yar. Waa qofka hooyadaa kuugu soo xigta, haa marka laga yimaado hooyo. Waa qofka kaliya ee aad xasuusato hooyadaa mar kasta ood aragto iyada waayo waxaad xasuusanaysaa, dareemaysaa naxariistii badnayd ee hooyo. Markasta waxay kuula dhaqantaa sida hooyadaa oo kale.
Haweenku waa, ayeydaa waa qofka kaa dhex aragta ilmaheedii iyo beerkeedii oo ah hooyadaa ama aabbahaa. Waxaad iyada u tahay sidii ilmo ay dhashay, boggeeda ayey mar kasta doontaa inay kugu hayso. cidda ku maagta adiga ama wax kuu gaysata waa iyada cadawgeeda! Haweenku waa, walaashada kaa yar ama walaashaada kaa wayn. Garab iyo gaashaanbba way kuu tahay. Inaad ka qurux badnaato dadka, inaad dadka ka horrayso ood ka horumarto oo haddana lagugu soo hirto waa iyada hankeeda,himiladeeda iyo hadafkeeda. Haweenku waa, xaaskaaga ku jecel kuu diidda dhib oo dhan nafteedana kaa jecel kula talisa markasta, cadaw oo dhan bay haddana kaa caabisaa way ku hogo-tusaalaysaa, kuguna faanta markasta. Wax kasta ood u baahato waa gabadha kuu diyaarisa. Waa gabadha markasta kula wadaagta fool kasta oo noloshu leedahay. Waa gabadha murugoota haddaad murugaysan tahay, waa gabadha faraxda haddaad faraxsan tahay. Ubadka aad sugayso iyo ubadkaaga sidan u quruxda badan waa gabadha kuu dhashay, kuuna barbaarisay.
Haweenku waa, Eddaddaa, waa aabbahaa walaashii. Inankoodaa ku dhalay oo aabbahaa ah. Jacaylka ay inankooda u qabto mid ka sii sal ballaadhan bay kuu haysaa kuuna hayn doontaa.
Haweenku waa, taranka. Kuu tarmaha. Kaa tarmaha. Halyey kastoo jira, soona jiray, jirina doona iyagaa haweenku ka danbeeyey, ka danbeeya kana danbayn doona. Waa ayo se cidda igu diiddan?!
Faadumo Aadan Maxamuud (ina Buuni)
This post has already been read 64324
Previous articleFaa'iidooyinka Caafimaad ee uu Leeyahay Qaraha/Xabxabka
Next articleAf-hayeenka Qurba joogta Puntland oo dhaleeceeyey Sadbursiga saamiga awood qeybsiga Dowladda Puntland.